Home - Lavender Myanmar
Lavender Enterprise မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ မြန်မာပြည်တွင် အရည်အသွေးမြင့် ဆပ်ပြာထုတ်ကုန် များကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ Lavender ထုတ်ကုန်များကို Online/ Offline Distribution Channel များဖြင့် ဖြန့်ချီလျက်ရှိပါသည်။
OUR PRODUCTS THAT YOU LOVE
Lavender Hand Wash များ၏ အားသာချက်မှာ Bacteria ပိုးမွှားများကို 99.9% အထိ ကာကွယ် ပေးနိုင်ပြီး ဆီ နှင့် အညစ်အကြေးများ ကို အလွယ် တကူ ရှင်းလင်းစေ ပါသည်။ ထူးခြားချက် မှာ လက်ဆေးပြီးသော အချိန်တွင် သင်းပျံ့သော မွှေးရနံ့ ရရှိပါသည်။
MORE ABOUT HAND WASH ➔
Lavender ရဲ့ ဆီနှစ်ဆပြောင်တဲ့ ပန်းကန်ဆေး ဆပ်ပြာက သင့်ရဲ့ပန်းကန်ဆေးရတဲ့ အချိန်တွေကို လျော့နည်းစေ မှာပါ။
Pump ခေါင်းလေးပါဝင်လို့ သုံးရလွယ်ကူပါတယ်။
MORE ABOUT DISH WASH ➔
Lavender General Use – Classic ဘက်စုံသုံး ဆပ်ပြာဆီကတော့ လက်ဆေး၊ အဝတ်လျှော်၊ ပန်းကန်ဆေး၊ ကားဆေး၊ ကြမ်းတိုက် အားလုံး အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
MORE ABOUT GENERAL USE ➔
Lavender Hand Sanitizing Gel – ရေမလို လက်သန်ဆေးရည် ကတော့ အပြင်သွားတဲ့အခါ ဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်၊ ရုံး၊ ကျောင်း မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာမရွေး Covid-19 ပိုးမွှားနှင့် အခြားသော ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှားများကို ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
MORE ABOUT HAND SANITIZING GEL ➔
Lavender Hand Sanitizing Spray – ရေမလို လက်သန့်ဖြန်းဆေးရည် ကတော့ အပြင်သွားတဲ့အခါ ဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်၊ ရုံး၊ ကျောင်း မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာမရွေး Covid-19 ပိုးမွှားနှင့် အခြားသော ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှားများကို ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
MORE ABOUT HAND SANITIZING SPRAY ➔
Lavender Glass Cleaner – မှန်ကြည်ဆေးရည် ကတော့ မှန်၊ ပြတင်းပေါက်၊ စားပွဲစသော ပရိဘောဂများတွင် အညစ်အကြေးများကို ကင်းစင်စေပြီး တောက်ပြောင်စေပါသည်။
MORE ABOUT GLASS CLEANER ➔
Covid 19 ရောဂါမှကာကွယ်ရန် မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမည့်အချက်များ
Covid 19 ရောဂါမှကာကွယ်ရန် မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမည့်အချက်များ #Lavender_Your_Choice #Covid19 #Protection #Guidelines Ref:...
We wish you to have safe and fit Thadingyut!
We wish you to have safe and fit Thadingyut! #Lavender_Myanamar #Thadingyut_Full_Moon_Day
Copyright © 2022 Lavender Enterprise Company Limited.